Clothing and Lifestyle For Pregnant Mother in Summer – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Clothing and Lifestyle For Pregnant Mother in Summer
မမဗိုကျတို့အတှကျ နှရောသီတှငျ ဝတျစားဆငျယငျမှု နဲ့ နထေိုငျစားသောကျမှု
မွနျမာပွညျရဲ့ နှရောသီဟာ သာမနျလူတှအေတှကျတောငျ ပူလှနျးလှပွီး တကယျ ဂရုစိုကျရတဲ့ ရာသီဖွဈပါတယျ… ကိုယျဝနျဆောငျ မမဗိုကျတို့အတှကျဆို ပိုတောငျဂရုစိုကျရမပေါ့.. အထူးသဖွငျ့ အပူပိုငျးဒသေတှမှောနတေဲ့ မမဗိုကျတို့ပေါ့…
ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့ အခြိနျတှငျ သာမနျလူထကျ ကိုယျအပူခြိနျမြားတတျပါတယျ.. ဒါပွငျ ရာသီဥတုကလဲ ပူမယျဆိုတော့ မမဗိုကျတို့အတှကျ အဝတျအစားလေးတှေ ရှေးခယျြသငျ့ပီပေါ့…
ကိုယျဝနျနုသေးတဲ့ မမဗိုကျတို့အတှကျကတော့…. ဗိုကျဖုံးအင်ျကြီမဝတျခငျြသေးပါကလညျး ပေါ့ပါးသော၊လဝေငျလထှေကျကောငျးတဲ့ အင်ျကြီ၊ဘောငျးဘီစကပျတို့ကို ဝတျဆငျပါ
ကိုယျဝနျရငျ့လာပွီဆိုရငျတော့ ဗိုကျဖုံး အင်ျကြီက အသငျ့တျောဆုံးပေါ့..
ဖွဈနိုငျရငျ လကျရှညျအင်ျကြီမြားကိုဝတျဆငျပါ.. ဒါမှသာ နလေောငျခွငျးကနေ ကာကှယျနိုငျပွီး အရပွေားတိုကျရိုကျမထိတဲ့ အတှကျ အပူလဲ သကျသာတာပေါ့…
အဝတျအစားအရောငျကို အပူစုပျလှယျတဲ့ အမညျးရောငျ၊အရောငျအရငျ့တှေ မဝတျသငျ့ပါ… အဖွူရောငျ(သို့)အရောငျလှငျသော၊ဖြော့သောတော့ အရောငျတှကေို ရှေးခယျြဝတျဆငျပါ
နပေူထဲ သှားပွီဆိုပါက မိမိ၏မကျြနှာနှငျ့ လညျပငျးထိ ကာနိုငျတဲ့ ပွနျ့ကယျြသော ဦးထုပျဆောငျးပါ..(သို့) ပေါ့ပါးသော ခေါငျးစညျးပဝါ နဲ့ စညျးပါ..
နလေောငျခံ lotion လိမျးပါ..
အလုပျကိစ်စရှိပါက ဖွဈနိုငျရငျ ရာသီဥတုအေးမယျ့ရကျမှ အပွငျထှကျပါ.. မဖွဈမနဆေိုပါက အပူရှိနျလြော့သော ညနပေိုငျးတို့ကို ရှေးခယျြပါ..
bus ကားပျေါ (သို့) လူမြားသောနရော၊အပူကဲမယျ့နရောသို့ သှားပါက ဘကျထရီအသုံးပွု လကျဆောငျပနျကာလေး ယူသှားပါ..
နှရောသီ ကမျးခွခေရီး ထှကျပါကလညျး တတျနိုငျသလောကျ ‘နရေောငျ’မထိပါနဲ့.. အရိပျအောကျတှငျ နပေါ.. ရကေစားပါကလညျး အပူရှိနျအနညျးဆုံးအခြိနျမှာ ကစားပါ…
အပူသကျသာအောငျ ရကေူးကနျသှားရငျလညျး သငျ့တျောပါတယျ..ရကေူးခွငျးဟာ ခွထေောကျယောငျခွငျးတှကေို သကျသာစတောမို့.. လကေ့ငျြ့ခနျးကောငျးတဈခုပါ..အရိပျရတဲ့ ရကေူးကနျဆို ပိုသငျ့တျောပါတယျ…
အရမျးအေးသော ရနှေငျ့လညျး ရမေခြိုးသငျ့ပါ.. ဒါဟာ အပူကို မသကျသာစပေဲ ရအေေးကို မိမိခန်ဓာကိုယျမှ ထပျပွီး တုံ့ပွနျရသဖွငျ့ ကိုယျအပူခြိနျတကျတာ.. ခမျြးတုနျတာ.. ဖြားတာတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ
အရညျရှမျးသော အစားအသောကျမြားစားပါ.. ကိုယျဝနျဆောငျနခြေိနျမှာ ရဓောတျခမျးခွောကျလှယျတာမို့ အလှယျတကူ နှုံးမယျ..ပငျပနျးလှယျပါတယျ..ဒါတှေ ကာကှယျဖို့ဆိုရငျ သှားလရော ရဗေူးဆောငျပါ.. နစေ့ဉျ ရကေို ပုံမှနျသောကျပေးပါ..
အငနျဓာတျမြားတာတှေ ရှောငျပါ. ဒါမှ ရဓောတျခမျးခွငျးကို ကာကှယျနိုငျသလို ပိုမို နထေိုငျကောငျးပါမယျ..
အိမျတှငျးနထေိုငျပါက အပူခြိနျနညျးသော၊လဝေငျလထှေကျကောငျးတဲ့နရောမြားတှငျနပေါ…နရေောငျတိုကျရိုကျ မဝငျစရေနျ ခနျးစီးလိုကျကာမြား တပျဆငျပါ..
မိမိနထေိုငျရာအိမျ၊ဒသေတှငျ အရမျးပူပွငျးပါက အပူသကျသာသော နရောသို့ ခတ်ေတပွောငျးနထေိုငျသငျ့ပါတယျ…
အိမျမှုကိစ်စတှကေို တျောတနျရုံလောကျသာ လုပျပါ… ခကျြပွုတျ၊တောကျတိုမယျရတှေ လုပျစရာရှိလြှငျ တခွားသူမြားကူညီနိုငျပါက ကူညီခိုငျးပါ… ကိုယျဝနျဆောငျနတေဲ့ ကာလဟာ မိခငျအတှကျ ပငျပနျးတာမို့ တတျနိုငျသမြှ အနားယူပါ…
Reference : babycentre
မမ​ဗိုက်​တို့အတွက်​ ​နွေရာသီတွင်​ ဝတ်​စားဆင်​ယင်​မှု နဲ့ ​​နေထိုင်​စား​သောက်​မှု
​မြန်​မာပြည်​ရဲ့ ​နွေရာသီဟာ သာမန်​လူ​တွေအတွက်​​တောင်​ ပူလွန်းလှပြီး တကယ်​ ဂရုစိုက်​ရတဲ့ ရာသီဖြစ်​ပါတယ်​… ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ မမဗိုက်​တို့အတွက်​ဆို ပို​တောင်​ဂရုစိုက်​ရမ​ပေါ့.. အထူးသဖြင့်​ အပူပိုင်း​ဒေသ​တွေမှာ​နေတဲ့ ​မမ​ဗိုက်​တို့​ပေါ့…
ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​တဲ့ အချိန်​တွင်​ သာမန်​လူထက်​ ကိုယ်​အပူချိန်​များတတ်​ပါတယ်​.. ဒါပြင်​ ရာသီဥတုကလဲ ပူမယ်​ဆို​တော့ မမ​ဗိုက်​တို့အတွက်​ အဝတ်​အစား​လေး​တွေ ​ရွေးချယ်​သင့်​ပီ​ပေါ့…
ကိုယ်​ဝန်​နု​သေးတဲ့ မမ​ဗိုက်​တို့အတွက်​က​တော့…. ​​ဗိုက်​ဖုံးအင်္ကျီမဝတ်​ချင်​​သေးပါကလည်း ​ပေါ့ပါး​​သော၊​လေဝင်​​လေထွက်​​ကောင်းတဲ့ အင်္ကျီ၊​ဘောင်းဘီစကပ်​တို့ကို ဝတ်​ဆင်​ပါ
ကိုယ်​ဝန်​ရင့်​လာပြီဆိုရင်​​တော့ ဗိုက်​ဖုံး အင်္ကျီက အသင့်​​တော်​ဆုံး​ပေါ့..
ဖြစ်​နိုင်​ရင်​ လက်​ရှည်​အင်္ကျီများကိုဝတ်​ဆင်​ပါ.. ဒါမှသာ ​နေ​လောင်​ခြင်းက​နေ ကာကွယ်​နိုင်​ပြီး အ​ရေပြားတိုက်​ရိုက်​မထိတဲ့ အတွက်​ အပူလဲ သက်​သာတာ​ပေါ့…
အဝတ်​အစားအ​ရောင်​ကို အပူစုပ်​​လွယ်​တဲ့ အမည်း​ရောင်​၊အ​ရောင်​အရင့်​​တွေ မဝတ်​သင့်​ပါ… အဖြူ​ရောင်​(သို့)အ​​ရောင်​လွင်​​သော၊​ဖျော့​သော​တော့ အ​ရောင်​​တွေကို ​ရွေးချယ်​ဝတ်​ဆင်​ပါ
​နေပူထဲ သွားပြီဆိုပါက မိမိ၏မျက်​နှာနှင့်​ လည်​ပင်းထိ ကာနိုင်​တဲ့ ပြန့်​ကျယ်​​သော ဦးထုပ်​​ဆောင်းပါ..(သို့) ​​ပေါ့ပါး​သော ခေါင်းစည်းပဝါ နဲ့ စည်းပါ..
​နေ​လောင်​ခံ lotion ​လိမ်းပါ..
အလုပ်​ကိစ္စရှိပါက ဖြစ်​နိုင်​ရင်​ ရာသီဥတု​အေးမယ့်​ရက်​မှ အပြင်​ထွက်​ပါ.. မဖြစ်​​မ​နေဆိုပါက အပူရှိန်​​လျော့​သော ည​နေပိုင်းတို့ကို ​ရွေးချယ်​ပါ..
bus ကား​ပေါ် (သို့) လူများ​သော​နေရာ၊အပူကဲမယ့်​​နေရာသို့ သွားပါက ဘက်​ထရီအသုံးပြု လက်​​ဆောင်​ပန်​ကာ​လေး ​ယူသွားပါ..
​နွေရာသီ ကမ်း​ခြေခရီး ထွက်​ပါကလည်း ​တတ်​နိုင်​သ​လောက်​ ‘​နေ​ရောင်​’မထိပါနဲ့.. အရိပ်​​အောက်​တွင်​ ​နေပါ.. ​ရေကစားပါကလည်း အပူရှိန်​အနည်းဆုံးအချိန်​မှာ ကစားပါ…
အပူသက်​သာ​အောင်​ ​ရေကူးကန်​သွားရင်​လည်း သင့်​​တော်​ပါတယ်​..​ရေကူးခြင်းဟာ ခြေ​ထောက်​​ယောင်​ခြင်း​တွေကို သက်​သာ​စေတာမို့.. ​လေ့ကျင့်​ခန်း​ကောင်းတစ်​ခုပါ..အရိပ်​ရတဲ့ ​ရေကူးကန်​ဆို ပိုသင့်​​တော်​ပါတယ်​…
အရမ်း​အေး​သော ​ရေနှင့်​လည်း ​ရေမချိုးသင့်​ပါ.. ဒါဟာ အပူကို မသက်​သာ​စေပဲ ​ရေ​အေးကို မိမိခန္ဓာကိုယ်​မှ ထပ်​ပြီး တုံ့ပြန်​ရသဖြင့်​ ကိုယ်​အပူချိန်​တက်​တာ.. ချမ်းတုန်​တာ.. ဖျားတာ​တွေ ​ဖြစ်​​စေနိုင်​ပါတယ်​
အရည်​ရွမ်း​သော အစားအ​သောက်​များစားပါ.. ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေချိန်​မှာ ​ရေဓာတ်​ခမ်း​ခြောက်​လွယ်​တာမို့ အလွယ်​တကူ နှုံးမယ်​..ပင်​ပန်းလွယ်​ပါတယ်​..ဒါ​တွေ ကာကွယ်​ဖို့ဆိုရင်​ သွား​လေရာ ​ရေ​ဗူး​ဆောင်​ပါ.. ​နေ့စဉ်​ ​ရေကို ပုံမှန်​​သောက်​​ပေးပါ..
အငန်​ဓာတ်​များတာ​တွေ ​ရှောင်​ပါ. ဒါမှ ​ရေဓာတ်​ခမ်းခြင်းကို ကာကွယ်​နိုင်​သလို ​ပိုမို ​နေထိုင်​​ကောင်းပါမယ်​..
အိမ်​တွင်း​နေထိုင်​ပါက အပူချိန်​နည်း​သော၊​လေဝင်​​လေထွက်​​ကောင်းတဲ့​နေရာများတွင်​​နေပါ…​နေ​ရောင်​တိုက်​ရိုက်​ မဝင်​​စေရန်​ ခန်းစီးလိုက်​ကာများ တပ်​ဆင်​ပါ..
မိမိ​နေထိုင်​ရာအိမ်​၊​ဒေသတွင်​ အရမ်းပူပြင်းပါက အပူသက်​သာ​သော ​နေရာသို့ ​ခေတ္တ​ပြောင်း​နေထိုင်သင့်​ပါတယ်​…
အိမ်​မှုကိစ္စ​တွေကို ​တော်တန်​ရုံ​လောက်​သာ လုပ်​ပါ… ချက်​ပြုတ်​၊​တောက်​တိုမယ်​ရ​တွေ လုပ်​စရာရှိလျှင်​ တခြားသူများကူညီနိုင်​ပါက ကူညီခိုင်းပါ… ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​နေတဲ့ ကာလဟာ မိခင်​အတွက်​ ပင်​ပန်းတာမို့ တတ်​နိုင်​သမျှ အနားယူပါ…